COVID-19 என்பது கொரோனா வைரஸால் ஏற்படும் ஒரு தொற்று நோய். நீங்கள் மற்றவர்களுடன் மிக நெருக்கமாக இருந்தால், குறிப்பாக இருமல் அல்லது தும்முவோர் அல்லது அசுத்தமான ஒன்றை நீங்கள் தொட்டால் நீங்கள் அதைப் பெறலாம்.
कुछ मंजिलों में Covid का कोई मामला नहीं है और बहुत कमरों में भी कोई मामला नहीं है लेकिन कई कमरों में हैं
৩) আপনার রুমের কেউ যদি অসুস্থ থাকে তবে তাদের ক্লিনিকে পাঁঠাতে সাহায্য করুন। তা না হলে অন্তত অন্যদের জন্য দূরে থাকুন।
ကိုယ်ကိုကိုယ် သေသေချာချာ ကာကွယ်ပြီးနေထိုင်ရပါမယ်။ အခန်းဖော်တွေနဲ့ထိတွေ့နေပေမဲ့လဲ တခြားအခန်းကလူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှူ လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိအောင်နေပါ။ လူတွေနဲ့ အနည်းဆုံး ၁ မီတာ ခွာခွာနေပါ။ စားချိန်နဲ့ အိမ်ချိန်ကလွဲလို့ မျက်နှာဖုန်း (mask) ကိုအမြဲဝတ်ထားပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ပေးထားတဲ့ပစ်စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေပါ။အထူးသဖြင့်လူအများအသုံးပြုတဲ့ပစ်စည်းတွေကိုသုတ်ပြီးမှကိုင်ပါ ဥပမာ တံခါးလက်ကိုင် ၊ ရေပိုက်ခေါင်း ၊ တန်း ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ လက်ကို မကြာခဏ မှန်မှန်ဆေးပါ ။